Wararka Maanta: Sabti, Jan 11, 2020-Cumaan oo Suldaan cusub yeelatay
Haitham Bin Tariq al-Said oo ahaa Wasiirka Dhaqanka ayaa loo dhaariyay inuu noqdo Hoggaamiyaha cusub ee Cumaan, isagoo ay ilmo adeer yihiin Suldaanka geeriyooday.
Sultan Qaboos bin Saciid Al Saciid oo ahaa boqorkii dalka Cumaan ayaa isagu geeriyooday xalay, isaga oo ay da'diisu ahayd 79 jir.
"Anaga oo aad uga xun ayaa waxay boqortooyada u murugoonaysaa geerida boqor Sultan Qaboos bin Sacad, oo Jimcihii geeriyooday ," ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay boqortooyada Cumaan.
Bishii aanu soo dhaafnay ayuu dalka dib ugu soo laabtay ka dib markii uu howlo caafimaad u aaday dalka Biljim.
Ma cadda ilaa iyo imika xanuunka uu u geeriyooday Sultan Qaboos bin Saciid Al Saciid
Intii uu xilka hayay ayaa waxaa uu dalkaasi gaaray hormar ballaaran, balse dadka ay siyaasadda isaga soo horjeedeen ayaa la aamusiyay oo cadaadis la kulmay.